अनौठो संसार Archives - Buletin Nepal
ब’र्सिय आ’न्टीलाई घु’म्न जानी र फेसबु’कमा बोल्ने केटा साथीको खोजी चाहाना हुनेले यसरि तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस.
७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०५:४५
६ जेष्ठ २०७८, बिहीबार ०६:१३
बुडापाकाहरु को एउटा पुरानो भनाई गाउघरमा सुनिरहनु भएकै छ होला नि, चालिसे लागेछ बैस जागेछ । यो उखान पहिलेको बुडापाकाहरुले भन्ने गरेका हुन् । बुडापाकाका अनुसार जीवनमा पहिलो पटक १६ वर्ष र दोस्रो ४० वर्षमा गरी २ पटक बैस जाग्छ रे । हाम्रो समाजमा कहिकतै महिलाहरु ४० वर्षपछि अर्को स’म्बन्धमा रहेको घटनाहरु बेलाबेलामा.....
मंगल ग्रहमा एक उभिएको महिला देखिएपछि…..(भिडियोसहित)
१३ पुष २०७७, सोमबार १२:०६
मंगल ग्रहको प्रकाशका कारण उक्त ठाँउमा महिला जस्तै आकार बनेको कतिपयले आँकलन मंगल ग्रहमा एक नयाँ रहस्यमय घटना देखिएको छ । मंगल ग्रहमा एक महिला जस्तै देखिएको तस्बिर नासा सार्वजनिक गरेको हो । तस्बिरले विश्वभर तरंग ल्याएको छ । मानव जीवनको कल्पना गर्न असम्भव रहेको ठाँउमा महिला देखिएको भन्ने विषयले वैज्ञानिकहरुमा.....
लोखर्केले पानी मागेर खाएको भिडियो भाइरल ! हेर्नुस यो अनौठो भिडियो !
८ श्रावण २०७७, बिहीबार ०८:०६
एजेन्सी, के तपाईंले कहिल्यै कुनै लोखर्केलाई मानिसले झै बोतलबाट पानी पिएको देख्नु भएको छ । अझ एक बालक झै मानिससँग पानी मागेर लोखर्केले पानी पिएको देख्नु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अहिले एक लोखर्केले बोतलबाट पानी पिएको भिडियो भाइरल भएको छ । सुसान्त नन्दा नामक एक ब्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेको तिर्खाएको.....
कोरोना पछि एलियन आउँदै पृथ्वीमा । देखीन थाले यस्ता प्रमाणहरू ।
१३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १६:३६
एजेन्सी यस समय, जब सम्पूर्ण देश कोरोना भाइरसबाट विचलित भएको छ, एउटा विशिष्ट गरीब आवाजले बेंगलुरुका जनतालाई चकित तुल्यायो। अफिसरदेखि लिएर सर्वसाधारण मानिससम्म समेत उनीहरूले यो बुझेका छैनन् कि आखिर यस्तो डरलाग्दो र ठूलो आवाजले के कारण दियो। त्यहाँ धेरै अनुमान गरिएको छ कि त्यहाँका मानिसहरू त्रासले भइरहेका.....
अनौठो सजाय: आफ्नो श्रीमती भगाउने पुरुषकै श्रीमती लिएर फरार !!! केटाहरुले होस् गरौ है !!
४ जेष्ठ २०७७, आईतवार १७:०२
जेठ ४, हेलो, तपाईं दीपक हो । हो, किन । म जितबहादुर दर्नाल, कतारबाट किन मेरी श्रीमती लानुभा’को । लगेँ, तँ सक्छस् भने मेरी पनि लगेर देखा । यो वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कतारमा रहेका मोरङ, उर्लाबारी ६, मंगलबारेका जितबहादुर दर्नाल तथा सोही गाविस वडा नम्बर ९ का दीपक नेपालीबीचको फोन वार्ता हो । वैदेशिक रोजगारीमा.....
अचम्मको संसार छ, लुँडोमा हारेपछि श्रीमानद्वारा श्रीमतीलाई लात्ती प्र’हार, श्रीमती अहिले अस्पतालमा !
१९ बैशाख २०७७, शुक्रबार १५:१०
एजेन्सी । अनलाइन लुँडोमा श्रीमानले हारेको रिसमा श्रीमतीमाथि उनले लात्ती प्र’हार गरेका छन् । २૪ वर्षीय महिला अहिले अस्पतालमा उपचार गरिरहेकी छिन् । उनको मेरुदण्डमा असर परेको छ । सुन्दा अचम्म लागे पनि यो भारतको गुजरात प्रदेशको भाडोडरा सहरको यथार्थ घटना हो । परिवारको आर्थिक सहयोगको लागि ती महिलाले.....
१७ बैशाख २०७७, बुधबार ०४:४१
बुलेटिन नेपाल भनिन्छ नि चालिसे लागेछ बैस जागेछ । यो उखान पहिलेको बुडापाकाहरुले भन्ने गरेका हुन । बुडापाकाका अनुसार जिवनमा पहिलो १६ वर्ष र दोख्रो ४० वर्षमा गरी २ पटक बैस जाग्छ रे यस्तैमा आज हामी आज तपाईहरुलाई महिलाहरुको ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहनुका कारणहरुका बारेमा जानकारी गराउन गईरहेका छौं । विवाह.....